Kulanka dhallinyarada Boosaaso | Guddiga Madaxabannaan ee Doorashooyinka Qaranka
Kulanka dhallinyarada Boosaaso
Maanta 29ka Jannaayo dhallinyarada ku dhaqan gobolka Bari gaar ahaan magaalada Boosaaso waxa ay ka qayb-galeen kulan guddiga doorashooyinka Soomaaliya ay ku qabteen xarunta Gobolka. Kulanka u jeedkiisu waxa uu ahaa in dhallinyarada Boosaaso laga tala geliyo geedi-socodka doorashooyinka qof iyo cod ee 2020ka.
Kulanka waxaa ka soo qayb galay maamulka gobolka, kan degmada, wakiillo ka kala socda wasaaradaha dastuurka, dhalinyarada, shaqada iyo shaqaalaha Puntland, hoggaamiyaasha ururada dhallinyarada gobolka Bari iyo ardada jaamacadaha.
Liibaan Cabdullaahi, guddoomiyaha ururka dhallinyarada Abyan oo ku hadlay magaca ururrada dhalinyarada gobolka Bari waxa uu muujiyay sida dhalinyaradu ay ugu faraxsantahay booqashada guddiga doorashooyinka Soomaaliya. Waxa uu sidoo kale carrabka ku dhuftay in dhallinyarada ay ka go’antahay in ay la shaqeeyaan guddiga si ay u helaan xuquuqdooda aasaasiga ah iyo tan siyaasadeedba.
Dhankiisa wakiilkii ka socday wasaaradda dastuurka iyo dimuqraadiyaynta Puntland M.ne Maxamuud Xidig oo ah nin dhallinyaro ah ayaa dhallinyarada ku dhiirri geliyay in ay dadaal badan geliyaan la shaqeynta guddiga doorashooyinka, qof walibana dadka Soomaaliyeed ku wacyi geliyo muhiimadda ay doorashadu waddanka u leedahay.
Ugu danbeyntii guddoomiye ku xigeenka Guddiga Madaxabannaan ee Doorashooyinka Qaranka (GMDQ) M.ne Sayid Cali Sheekh Maxamad waxa uu dhallinyarada uga mahadceliyay ka soo qayb-galka kulankaan looga tashanayo aayaha waddanka. Wuxuu dhallinyarada si kooban ugu sharraxay ujeeddada safarrada guddigu uu ku kala bixinayo guud ahaan waddanka oo ah in ay helaan talooyinka dadka Soomaaliyeed si 2020ka waddanka ay uga dhacdo doorasho qof iyo cod ah.
niec	2018-01-30T05:14:19+00:00	January 30th, 2018|Warbixinno|
Wafdi ka socda GMDQ oo soo kor-joogteeyay doorashooyinka dowladaha hoose ee waddanka TUNIISIYA
28-30ka Abriil, 2018. Marwo xaliima, guddoomiyaha gmdq ayaa magaalada istanbuul ee dalka turkiga uga qayb-gashay kulan looga hadlaayay sida haweenka carabtu ay uga qayb-qaadan karaan geeddi-socodka doorashooyinka.
28-30ka Abriil, 2018. Marwo xaliima, guddoomiyaha GDMQ ayaa magaalada Istanbuul ee dalka turkiga uga qayb-gashay
April 23-25, 2018, GMDQ ayaa ka qayb-galay
DOORASHADII XILDHIBAANKA BEESHA DUDUBLE (MAXAMAD CAMAL)
Wafdi ka kooban Gudoomiyaha Guddiga Madaxbannaan Doorashaooyinka Qaranka Xubno ka mid ah Guddiga oo kala ah